I-N-Methyl-D-aspartic acid (i-NMDA) ipowder (6384-92-5) ≥98% | AASraw
/ iimveliso / I-Nootropics powder / N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) umgubo
Akukho kalo SKU: 6384-92-5. Udidi: I-Nootropics powder
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwi-gram ukuya kwinqanaba le-N-Methyl-D-aspartic acid (i-NMDA) ipowder (6384-92-5), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) sisiphumo se-amino acid esisebenza njenge-agonist ethile kwi-receptor ye-NMDA, kwaye ngenxa yoko ilingisa isenzo se-neurotransmitter glutamate kuleyo receptor. Ngokuchasene ne-glutamate, i-NMDA ibopha kwaye ilawule i-receptor engentla kuphela, kodwa hayi ezinye ii-glutamate receptors. I-NMDA sisixhobo esenziwe ngamanzi esinyibilikayo esingafumaneki kwisihlunu sebhayoloji. Yaqala ukwenziwa ngeminyaka yoo-1960. I-NMDA yiprotootoxin; Olu phawu lunezicelo kuphando lwe-neuroscience.
I-N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) ividiyo ye powder
I-N-Methyl-D-aspartic acid (i-NMDA) i-powder basic Characters
igama: I-N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) ipowder
Ifomula yeMolekyuli: C5H9NO4
Ubunzima Ezinto: 147.13
Isitoreji sokugcina: Gcina kwi RT
I-N-Methyl-D-aspartic acid (i-NMDA) ipowder ekuphuculeni umsebenzi wengqondo kunye nokunyusa okunye
I-N-Methyl-D-aspartic acid powder; Powder NMDA; 6384-92-5; N-Methyl-D-aspartate; N-Methylaspartate; D-Aspartic acid.
I-N-Methyl-D-aspartic acid powder Ukusetyenziswa
Umzimba womsebenzi usebenzisa le ndlela uwela phantsi kwegama elithi "izifundo zezilonda." Abaphandi basebenzise umgubo we-NMDA kwimimandla ethile yesilwanyana (sesilwanyana) sobuchopho okanye intambo yomqolo kwaye emva koko kuvavanywa isimilo somdla, njengokuziphatha kokuziphatha. Ukuba indlela yokuziphatha iphazamisekile, iphakamisa ukuba izicubu ezonakalisiweyo zaziyinxalenye yommandla wobuchopho owenza igalelo elibalulekileyo kwinkcazo eqhelekileyo yokuziphatha. Imizekelo yabachasi be-NMDA powder receptor yi-APV, dextromethorphan, ketamine, phencyclidine (PCP), riluzole, kunye nememantine. Zihlala zibizwa ngokuba zii-NMDA powder receptor antagonists.
Akukho kuphando olwenziwe kwipoyi ye-NMDA ebantwini kunye nokuba yeyiphi i dose efanelekileyo. Imilinganiselo iyahluka ngokubanzi, kunye nabanye abantu bathi i-50 mg ngosuku liphezulu, ngelixa ezinye iilwimi ziye zazama ukufikelela kwi-2 g ngosuku. Ngenxa yokungafani okubanzi kwiingcebiso, ukubaluleka ukuqala phantsi kwaye kwakha ngokusekelwe kwindlela izinto ezivakalelwa ngayo.
Isilumkiso kwi-N-Methyl-D-aspartic acid powder
Akukho uphando oluninzi lwenziwe kwi powder ye-NMDA, ngoko imiphumo engathandekiyo ingaziwa. Nangona kunjalo ophando olukhoyo, iziphumo ezimbi ezingekho embi kubantu bemihla ngemihla ye-NMDA yokuncedisa i-powder-like-like-none.
Kukho iiphando eziye zenziwa kwiibhendi zedatha apho i-NMDA powder yayisetyenziswa ngokuthe ngqo kwiisishu zobuchopho ezibangele ukufa kweseli. Kodwa oku kufunyenwe kuye kwagqitywa ngokupheleleyo. I-NMDA powder ingabalwa njenge-excitotoxin, kodwa amathuba okubangela ukufa kwabangelwa ngumntu ngenxa yokugqithisa kakhulu kunzima.
(I-NMDA powder) ngumdlali we-amino acid. Xa kuthe wagqithiselwa kuboniswa uncedo ekuphuculeni imveliso yokukhula kwehomoni, i-FSH kunye ne-LH, eyenza ibe yinto enamandla yokuvelisa i-testosterone.
I-O-Methyl-D-Aspartic-Acid (i-NMDA powder) sesinye sezona zinto ziphambili kuHlumo oluBomvu, ulwakhiwo lwezihlunu zeprimiyamu ye-Red Supplement, ukomeleza amandla kunye ne-testosterone ekonyusa ukongeza.
(1) Yintoni eyenziwa yi-N-Methyl-D-Aspartic-Acid?
I-N-Methyl-D-aspartic acid powder ibopha kwiindawo ze-receptor ze-NMDA zokufumana i-powder, ukulinganisa imiphumo ye-glutamate, i-neurotransmitter ephambili kwinkqubo yesantya ephakathi.
Xa i-NMDA powderRs isebenze, ivuselela ukukhutshwa kwe-Pregnenolone (P5); i-hormone ye-steroid ehamba phambili kwi-mineralocorticoids, i-estrogens, i-androgens, i-glucocorticoids, i-neuroactive steroids kunye ne-progesterones. Iimilinganiselo ezingaphezulu kwezi hormone zinokuphucula umgangatho wamandla engqondo, isimo sengqondo kunye nokunye.
Ukusetyenziswa kweendawo ze-NMDA zokufumana i-powder receptor kwandisa ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kwee-hormone ze-anabolic nge-endocrine system.
Oku kuthetha ukuba ukwandiswa komsebenzi we-NMDA ochaphazelekayo ungathintela amanqanaba e-testosterone, i-HGH (i-hormone yokukhula komntu), i-LH (i-hormone i-luteinizing), i-FSH (i-follicle stimulating hormone) kunye nezinye i-hormone ze-androgenic.
Siyazi ukuba i-NMDA ye-powder receptors kwingqondo ibandakanyeka ekulawuleni izicwangciso ze-testosterone kunye neengongezelo ezikhuthaza ukuba aba bantu bamkele i-receptors baye baboniswa ukwandisa amanqanaba e-testosterone kumadoda anamaqondo aphantsi.
(2) Inzuzo ye-N-Methyl-D-Aspartic-Acid
• Ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo
• Ukwandisa amanqanaba ombane kunye nomoya
• Ukukhuthaza uLibido
• Ukwandisa iTesttosterone
• Ukuphakamisa i-LH, i-FSH, i-HGH
• Ukukhuthaza umsebenzi wokuqonda
I-N-Methyl-D-aspartic acid I-Raw Powder
I-N-Methyl-D-aspartic acid powder Marketing
Indlela yokuthenga ipowder ye-NMDA: Thenga i-N-Methyl-D-aspartic acid powder ukusuka kwi-AASraw